यी हुन् बलिउडका सबैभन्दा नामुद धोकेबाज अभिनेता र अभिनेत्रीहरु……..कसले कसलाई दिए धोका
January 21, 2018	Comments Off on यी हुन् बलिउडका सबैभन्दा नामुद धोकेबाज अभिनेता र अभिनेत्रीहरु……..कसले कसलाई दिए धोका
बलिउडमा स्टारहरु बीच अफेयर हुनु सामान्य कुरा मानिन्छ । फिल्ममा एकसाथ काम गर्दा-गर्दै बलिउडको स्टारबीच अफेयर हुने गर्दछ । बलिउडको ग्ल्यामर दुनिया बाहिरबाट हेर्दा जति सुन्दर छ भित्रबाट त्यति कुरुप रहेको छ । प्रायः हामी बलिउड स्टारहरूको जीवनशैलीबाट प्रभावित हुन्छौ र उनीहरु जस्तै जीवन जिउने सपना देख्छौ। तर हामी बलिउडको चमकदार संसारको पछि लुकेको अध्यारो जान्न चाहदैनौ। बलिउडमा अफेयर भन्दा …
January 21, 2018	Comments Off on आगोले पोल्यो, पोल्ने बित्तिकै नगर्नुहोस् यी ६ काम
यदि शरीरको कुनै पनि भाग आगोले पोल्यो वा जल्यो भने तपाईले यसको लागि गरिने घरेलू उपचार घरमै बसेर प्रयोग गर्न सक्नु हुनेछ । के तपाईलाई थाहा छ, कि पोल्ने बित्तिकै ती कुन सावधानी अपनाउनु पर्दछ ? यसको कारणले समस्या अझ कष्ठदायक एवम् घाउ बढ्ने आशंका हुन्छ । यसकारण पोल्ने बित्तिकै गर्न नहुने यी ६ काम यस्ता छन् । १- अधिकांश …
January 21, 2018	Comments Off on सुत्नुअघि जहिले पनि यसो गर्नुहोस, मुहारमा झन् धेरै चमक आउछ
सुन्दर देखिन जो कोही पनि चाहन्छन् । विशेषगरी महिलाहरुको हकमा यो कुरा बढी लागु भएको देखिन्छ । तर, समय परिवर्तनसँगै व्यस्त र प्रतिस्पर्धाको जीवनशैली, कामको तनाव, अस्वस्थयता, उदासिनताले अधिकांश मानिसहरु तनावग्रस्त रहन्छन् । त्यसमा पनि धेरै महिलााहरुको घर गृहस्थी र बाहिरको काम गरेर दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुनाले उनीहरु अझ तनावग्रस्त रहने गर्दछन् । तनाव सगै थपिएको थकानले सौन्दर्यमा दुष्प्रभाव …
माउसुलिले टोक्यो? नआत्तिनुस घरमै यसरी गर्नुस उपचार र ज्यान जोगाउनुस
January 21, 2018	Comments Off on माउसुलिले टोक्यो? नआत्तिनुस घरमै यसरी गर्नुस उपचार र ज्यान जोगाउनुस
माउसुली नभएको घर सायदै होला । घरमा माउसुली सजिलै पाइन्छ । कुनै घरमा १/२ वटा हुन्छन् भने कुनै घरमा माउसुलिको खानदान नै बस्छन् । यो जुनसुकै मौसममा घरमा पाइन्छ ।तर गर्मीमा अलि बढी नै भेटिन्छ । यसको बीस हाम्रा लागि निकै घातक हुन्छ। यसको बीस लागेपछि उपचार सम्भव छैन र तुरुन्तै हाम्रो मृत्यु हुन्छ। रातिमा सहि उपचार पाउन मुस्किल गर्मी …
यि राशिका मानिस असाध्यै धनी हुन्छन्, तपाईको राशि कुन ?
January 21, 2018	Comments Off on यि राशिका मानिस असाध्यै धनी हुन्छन्, तपाईको राशि कुन ?
प्रत्येक वर्षका टप १०० धनीहरूको सूचीबाट अर्बपति छानिएका थिए । संसारभरि गरिएको सर्वेक्षणमा कुनै विशेष राशिको मानिस व्यापारमा अत्यन्त सफल भएको देखिएको छ । फोब्र्स पत्रिकाले सन् १९९६ देखि २०१५ सम्म गरेको सर्वेकक्षणमा कुम्भ राशि भएका मानिस बढि धनी भएको जनाईएको छ । संसारभरिका अर्बपतिहरूको जन्मदिनलाई आधार मानेर उनीहरूको राशि पत्ता लगाएर यो सर्वेक्षण गरिएको थियो । यसको परिणाम फोब्र्स …
January 21, 2018	Comments Off on कब्जियतको कारण पेट सफा हुँदैन भने राती सेवन गर्न नहुने यी ५ खाना
कब्जियतको समस्या देखा पर्दा हेभी मेडीसिन्सको सेवन गर्नु भन्दा प्राकृतिक घरेलू उपचार प्रयोग गर्दा नकारात्मक असर हुने सम्भावना हुँदैन । चिकित्सकका अनुसार, यदी कब्जियतको कारण बिहान राम्रो सँग पेट सफा नहुँदा रातिमा केहि सामान्य घरेलू उपचार अपनाई हरेक बिहान ताजा महसूस गर्नुहोस् । कब्जियतको समस्या बाट मुक्ति पाउन राती के गर्न नहुने र के गर्न हुने यस्ता छन्, उपायहरू जानी …
बलिउड अभिनेता अजय आफ्नी छोरी न्यासासंग डराउँछन् , आमा रुँदा टाइगरलाई टेन्सन …
January 21, 2018	Comments Off on बलिउड अभिनेता अजय आफ्नी छोरी न्यासासंग डराउँछन् , आमा रुँदा टाइगरलाई टेन्सन …
पर्दामा दसाैँ गुण्डालाई तह लगाउने दबङ रोलमा देखिने भए पनि वास्तविक जिन्दगीमा भने बलिउडका केही सुपरस्टार निकै डरपोक छन् । डरपोक यसर्थमा कि कुनै गल्ती गर्दा उनीहरू कसैले आमाको पिटाइ नै खाने गरेका छन् त कसैले बाबुको । अनि कोही छोराछोरीसँग थरथर हुन्छन् । भारतीय अनलाइनले केही सेलेब्रेटी कोसँग डराउँछन् भन्नेबारे रिपोर्ट बनाएको छ । आमासँग थुरथुर सलमान सुपरस्टार सलमान …
बुहारी आउनुअघि बुवालाई पोखरा घुमाउँदै तक्मे बुढा अर्थात् विल्सन बिक्रम
January 21, 2018	Comments Off on बुहारी आउनुअघि बुवालाई पोखरा घुमाउँदै तक्मे बुढा अर्थात् विल्सन बिक्रम
कलाकार तथा अभिनेता विल्सन बिक्रम राई ‘तक्मे बुढा’ अहिले पोखरामा छन् । गोर्खा र बराहा ज्वेलर्सको छैटौं बार्षिक उत्सवको कार्यक्रमका लागि पोखरा पुगेका उनले आफ्नो बुवालाई पनि साथमा लिएर गएका छन् । पोखरा पुगेका विल्सनले आफ्नो र बुवाको फोटो सामाजिक संजालमा समेत अपलोड गरेका छन् । बुवासँगको एक फोटो पोस्ट गर्दै विल्सनले ‘ सौभाग्य हो यो आफ्नो बाबू सङ्ग घुम्नु …
January 21, 2018	Comments Off on आफ्नो दुध बेचेर जिविकोपार्जन गर्छिन् यि युवती, उनको दुध पिएका पुरुषले भने ‘हाम्रो यौन क्षमता ह्वात्तै बढ्यो’
बेलायतकी एक २६ वर्षीय युवतीले आफ्नै दुध दुहेर विक्री गरिरहेकी छिन् । आफ्नो दुध बिक्रिबाट आफुले अहिलेसम्म ३ हजार ७ सय पाउण्ड अर्थात् झण्डै ५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेकी छिन् । उनले भब्य रुपमा क्रिसमस मनाउनका लागी आफ्नो दुध बेचेर खर्चको जोहो गरिरहेको बताएकमी छिन् । चार सन्तानकी आमा रेबेका हडसनकी कान्छी छोरी मिली डेढ वर्षकी छिन् । …
January 21, 2018	Comments Off on सलमान खानसँग नेपाल आउनै लागेका बेला ज्याकिलनका यस्ता गोप्य कुरा बाहिरिए
ज्याकलिन फर्नान्डेज युवापुस्तामाझ निकै नै लोकप्रिय बलिउड अभिनेत्री हुन् । पछिल्लो समय दमदार अभिनयका कारण चर्चित उनी निकै सुन्दर छिन् । श्रीलंकामा जन्मेकी उनी दुई कुराले चर्चित छिन्– एक उनी कसैको आड नलिई फिल्मी क्षेत्रमा लागिन् र दोस्रो भनेको उनी आफ्नो स्वास्थ्यबारे निकै चनाखो छिन् । सुगठित शरीरकी धनी ज्याकलिन फिटनेस कन्सस छिन् । फिल्म र टेलिभिजन विज्ञापन खेल्नुका अलवा …
घरमा माकुरा र किरा-फटेङ्ग्रा कहिल्यै आउनै नदिने, यस्तो चमत्कारिक बिरुवा
January 21, 2018	Comments Off on घरमा माकुरा र किरा-फटेङ्ग्रा कहिल्यै आउनै नदिने, यस्तो चमत्कारिक बिरुवा
यदि तपाइँ माकुरादेखि डराउनुहुन्छ वा माकुराको जाल हटाउने कामबाट दिक्क भईसक्नुभएको छ भने , आज हामी तपाइँलाई यस समस्याबाट मुक्ति पाउने उपायबारे जानकारी दिन्छौं । महङ्गा किट्नाशक औषधीको प्रयोगले हाम्रो स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्नुको साथै पैसा र समयको पनि नोक्सान गर्दछ ।त्यसैले तपाइँले यस समस्याबाट छुट्कारा पाउनको लागि प्राकृतिक उपायलाई अपनाउन जरुरी छ । माकुराले पुदिनाको गन्धलाई सहन सक्दैन । …
के तपाई ट्वाइलेटमा मोबाइल चलाउनुहुन्छ ? ज्यान जान सक्छ
January 21, 2018	Comments Off on के तपाई ट्वाइलेटमा मोबाइल चलाउनुहुन्छ ? ज्यान जान सक्छ
प्रविधिको युगमा मोबाइल एक अत्यावश्यक वस्तु बनेको छ । ट्वाइलेट वा बाथरुममा हुँदा फोन प्रयोग गर्ने धेरैको बानी हुन्छ । यदि तपाईमा पनि यस्तै बानी छ भने अब त्यसो नगर्नुहोस् ।ट्वाइलेटमा बसेका बेला गेम खेल्ने, च्याट गर्ने वा फोनमा बोल्ने गर्नु स्वास्थ्यमाथी खेलवाड गर्नु हो । यस्तो बानीले मृत्यु पनि हुनसक्छ । बाथरुम वा ट्वाइलेमा मोबाइल प्रयोग गर्ने बानीले गम्भिर …
विश्वकै अनौठो देश : जहाँको जनसंख्या छ जम्मा २९ जनाको, राष्ट्रपतिले नै पर्यटकलाई घुमाउन निस्किन्छन्
January 21, 2018	Comments Off on विश्वकै अनौठो देश : जहाँको जनसंख्या छ जम्मा २९ जनाको, राष्ट्रपतिले नै पर्यटकलाई घुमाउन निस्किन्छन्
तपाईले राष्ट्रपति बिच सकडमा एक्लै हिँडेको कहिल्यै देख्नुभएको छ ? प्रसंग हो मोलोसिया नाक देशको । जहाँको जनसंख्या ३३ जना छ । जहाँ २९ जना ब्यक्ति र ४ वटा कुकुर गरेर कुल जनसंख्या ३४ जनाको रहेको छ । अमेरिकाको नेवादामा रहेको यो स्वघोषित देशमा आफ्नो अलग कानून, परम्परा तथा अलग मुद्रासमेत रहेको डेलिमेलले उल्लेख गरेको छ । स्थापनाकालदेखि नै केभिन …
January 21, 2018	Comments Off on लसुन र अण्डाको बोक्रा निकाल्न गाह्रो भयो? यी सजिलो तरीका अपनाउनुहोस (भिडियो सहित)
लसुन र अण्डाको बोक्रा निकाल्न गाह्रो भयो? यी सजिलो तरीका अपनाउनुहोस (भिडियो सहित)लसुन र अण्डाको बोक्रा निकाल्न गाह्रो भयो? यी सजिलो तरीका अपनाउनुहोस (भिडियो सहित)लसुन र अण्डाको बोक्रा निकाल्न गाह्रो भयो? यी सजिलो तरीका अपनाउनुहोस (भिडियो सहित)लसुन र अण्डाको बोक्रा निकाल्न गाह्रो भयो? यी सजिलो तरीका अपनाउनुहोस (भिडियो सहित)लसुन र अण्डाको बोक्रा निकाल्न गाह्रो भयो? यी सजिलो तरीका अपनाउनुहोस (भिडियो …
Page 28 of 427« First...10202627282930»405060...Last »